T चालहरू एयरपोर्ट सुरक्षा नियन्त्रणमा समय बचत गर्न यात्रा समाचार
जब हामी उडान लिनुपर्दछ हामी एयरपोर्टमा सुरक्षा नियन्त्रणको सामना गर्दछौं, एक बोरिंग प्रक्रिया जसमा हाम्रो जेब खाली गर्नुपर्दछ वा हाम्रो ह्यान्डब्याग खोल्नु हुन्छ सुरक्षा नियन्त्रण पार गर्नका लागि।
त्यसकारण वास्तविक अलिडाड भियाजबाट हामी तपाईंलाई केहि उपयोगी सल्लाहहरू सिकाउन चाहान्छौं ताकि तपाईं छोटो समयमा बोर्डि can गर्न सक्नुहुनेछ।
1 एयरपोर्ट चाँडै पुग्नुहोस्
2 हात सामान, आवश्यक छ
3 प्रिन्ट बोर्डि passes पास
4 सुरक्षा नियन्त्रण सुविधा
5 आईडी हातमा
6 कमाण्डिंग अफिसरसँग सहयोग गर्नुहोस्
7 तपाईंको पुच्छर राम्रोसँग छनौट गर्नुहोस्
8 सुरक्षा जाँचमा निषेधित वस्तुहरू
एयरपोर्ट चाँडै पुग्नुहोस्
तपाईंको एयरलाइनको चेक-इन काउन्टरहरूको घण्टा जाँच गर्न र लामो लाइनहरूको सामना नगरीकन पहुँच गर्न सक्षम हुन एयरपोर्टमा जानको लागि अग्रिम प्रयास गर्नुहोस्।
धेरै मानिसहरू एयरपोर्टमा पुग्न अन्तिम मिनेटसम्म कुर्छन्। यसले सुरक्षा जाँच लामहरूलाई निश्चित समयमा भीड बनाउँन सक्छ र ती मार्फत बाटो एकदम ढिलो छ।
एयरपोर्टमा प्रारम्भिक आइपुगेपछि, हामी के चाहन्छौं समय बचत गर्नु, त्यहाँ अनावश्यक पर्खनु हुँदैन।
हात सामान, आवश्यक छ
यो झुठो देखिन्छ, तर अधिक सामानले ढिलाइमा पुर्‍याउँछ। केवल हात सामानको साथ यात्रा गर्नु भनेको एयरपोर्टमा चढ्दा समय र पैसा बचत गर्ने एउटा सरल तरिका हो किनभने त्यहाँ जाँच गर्न आवश्यक पर्दैन।
सुरक्षा नियन्त्रणको माध्यमबाट जाने प्रक्रियालाई गति दिनको लागि अर्को महत्त्वपूर्ण समस्या भनेको पारदर्शी र एयरट्याग ब्यागमा तपाईंको सामानको बाहिर तरल पदार्थ (साबुन, टुथपेस्ट, शेभिंग फोम, डिओडोरन्ट स्प्रे, इत्यादि) बोक्नु हो।
यदि तपाईंले यो चरण छोड्नु भयो र तरल पदार्थहरू तपाईंको हातको सामानमा राख्नु भएको छ भने, सुरक्षा नियन्त्रणमा उनीहरूले तपाईंलाई तपाईंको सूटकेस अनप्याक गर्न दिनेछन् र छुट्टै भण्डार गर्नुहोस्। यद्यपि धेरै एयरपोर्टहरूले यी झोलाहरू सित्तैमा प्रस्ताव गर्दछन्, यदि तपाईं समय बचत गर्न चाहानुहुन्छ भने उत्तम छ तपाईं आफैंको साथ र पहिले नै व्यवस्थित तरल पदार्थहरू लिएर आउनुहुनेछ।
प्रिन्ट बोर्डि passes पास
अनलाइन चेक-इनहरू दिनको क्रम हो। एयरपोर्टमा बोर्डमा समय बचत गर्न, लामहरूबाट बच्न तपाईंको बोर्डिंग पासहरू प्रिन्ट गर्नु उत्तम हुन्छ। अर्को विकल्प यो हो कि तपाईं यसलाई आफ्नो स्मार्टफोनमा डाउनलोड गर्नुहोस् तर, कहिलेकाँही प्राविधिक उपकरणहरू अचूक हुँदैनन्। कागजको प्रतिलिपि ल्याउनु उत्तम हुन्छ।
सुरक्षा नियन्त्रण सुविधा
यो एक सानो झुकाव जस्तो देखिन्छ तर सुरक्षा नियन्त्रणमा समय बचत गर्न यो आवश्यक हुन्छ कि तपाईसँग वस्तुहरू छन् जुन प्रक्रियामा अनुरोध गरिएको छ। त्यो हो, तरल पदार्थ, ट्याबलेट, कम्प्युटर, मोबाइल फोन, आदि।
सुरक्षा गार्डहरू द्वारा खोजी हुनबाट जोगिन नियन्त्रणको पारित गर्दा यो याद गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले सामानहरू राख्नु भएको सामानहरू सामान्य ट्रेमा राख्नु पर्दछ।
त्यस्तै गरी, हवाईजहाज लिने बित्तिकै हटाउन सजिलो फुटवेयर लगाउन सल्लाह दिइन्छ किनकि थुप्रै एयरपोर्टहरूमा यात्रुहरूलाई एक्स-रेद्वारा यसलाई विश्लेषण गर्न आफ्ना जुत्ताहरू लिन बाध्य पार्दछन्। जब तिनीहरू सुरक्षा चेक ना bare्गो पार गर्छन्। यसैले लामो लेसहरू वा धेरै कडा जुत्ता भएका बुटाहरू प्रक्रियाबाट ढिलो गर्नबाट जोगिनु उत्तम हो।
हाम्रो व्यक्तिगत कागजातलाई हातले बोक्नु (आईडी वा राहदानी) केहि चीज हो जुन हामीलाई सुरक्षा नियन्त्रणमा समय बचत गर्न सक्दछ।
कमाण्डिंग अफिसरसँग सहयोग गर्नुहोस्
यदि सबै ठीकठाक हुन्छ भने तपाईले एक पटक मात्र सुरक्षा मार्फत जानु पर्छ। यद्यपि केही एयरपोर्टहरूमा यात्रुहरूलाई प्राय: अनियमित रूपमा नियमित औषधी स्क्रीनि forको लागि छनौट गरिन्छ।
उनीहरूका सबै निर्देशनहरूसँग सहकार्य गर्नुहोस् र तपाईंलाई ती दिनको लागि उनीहरूलाई पर्खनुहोस्। उनीहरूलाई विश्वस्त पार्न कोशिस नगर्नुहोस् कि तपाईं हडबडमा हुनुहुन्छ किनकि त्यस्तो मनोवृत्तिले मात्र प्रक्रियामा ढिलाइ गर्दछ।
तपाईंको पुच्छर राम्रोसँग छनौट गर्नुहोस्
व्यक्तिमा निर्भर गर्दछ जुनसँग तपाईं सुरक्षा नियन्त्रणमा एक कतार साझा गर्नुहुन्छ, बोर्डमा समय बचत गर्नु सजिलो हुन्छ वा छैन।
कम्तिमा पनी प्रयास गर्नुहोस् जुन कम्तिमा ढिला हुन सक्छ। त्यो हो, जसमा धेरै बच्चाहरूका परिवार हुँदैन साना बच्चाहरू, वृद्ध वा कम गतिशीलता भएका मानिसहरूका साथ। ती सबैलाई एक्स-रे मार्फत समय लिन आवश्यक पर्दछ र प्रक्रिया पूर्ण गर्न मद्दतको आवश्यक पर्दछ।
सुरक्षा जाँचमा निषेधित वस्तुहरू
जस्तो तपाईंलाई अहिलेसम्म थाहा हुनुपर्दछ, केहि वस्तुहरू हात सामानमा तर जाँच गरिएको सूटकेसमा ट्रान्सपोर्ट गर्न अनुमति छैन। यस सूचीले कार्य उपकरणहरू, बन्दुक, तेज र तीक्ष्ण वस्तुहरू, वा रसायन समावेश गर्दछ। साथै खेलहरू, खेल उपकरणहरू (र्याकेटहरू, गोल्फ क्लबहरू, स्केटबोर्डहरू, बेसबल ब्याटहरू ...) वा कर्क्सक्रूजहरू।
एयरपोर्ट सुरक्षा नियन्त्रणमा समय बचत गर्न मद्दत गर्न सक्ने अरू कुन तरिकाहरू तपाईंलाई थाहा छ? तपाईलाई कुन सबैभन्दा प्रभावकारी लाग्छ? र कम से कम? कमेन्ट सेक्सनमा अन्य यात्रुहरूसँग आफ्ना विचारहरू साझेदारी गर्नुहोस्!
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » यात्रा » सुझावहरू » T चालहरू एयरपोर्ट सुरक्षा नियन्त्रणमा समय बचत गर्न